Michael Jackson's Coroner kwuru Propofol na-ata ụta maka ọnwụ - Ụwa 2022
Michael Jackson's Coroner kwuru Propofol na-ata ụta maka ọnwụ
Dọkịta ahụ mere nyocha nke Michael Jackson ka akwadoro ịgba akaebe Tuesday ọzọ na ikpe ọnwụ na-ezighi ezi na-ebo onye nkwalite egwu egwu Anschutz Entertainment Group (AEG) Live nke ịkọrọ ndị dọkịta akụkọ akụkọ ochie nwụrụ anwụ.
N'ime akụkọ gbasara onwu ahụ, Dr. Christopher Rogers si n'ụlọ ọrụ nyocha na Los Angeles County kwuru na mgbanwe ahụ dị egwu, gụnyere egbugbere ọnụ egbugbu egbugbu pink, nku anya egbugbuola ndò gbara ọchịchịrị, na n'ihu isi isi Jackson egbugbu oji - nke ikpeazụ ga-agwakọta usoro ntutu isi ya na wigs o yi.
Nnwale nyocha ahụ gosikwara na Jackson nwere vitiligo, ọrịa na-agba agba nke akpụkpọ ahụ, nke mere ka ụfọdụ akụkụ akpụkpọ ya yie ìhè na ndị ọzọ gbara ọchịchịrị.
N'ịgba akaebe n'izu a, Rogers kwubiri na e gburu Jackson site na ịṅụbiga mmanya ókè nke propofol, nke nwere ike ịbụ na ọtụtụ ọgwụ na-edozi ahụ nyere ya Dr. Charles Murray, dibịa nke so ya na njem.
Dan Anderson, onye na-ahụ maka toxicologist, gbara akaebe na Mọnde na ọkwa propofol dị na ahụ Jackson bụ "dakọtara na nnukwu anestesia ịwa ahụ." Ọgwụ a dị ize ndụ ma ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma, dị ka Anderson si kwuo, ma bụrụkwa ihe kpatara ọnwụ 31 na mpaghara n'ime afọ 14 gara aga, gụnyere igbu onwe onye isii nke ndị ọrụ ahụike gburu na otu "igbu obi ebere" nke mere n'ụlọ ọgwụ.
Ndị ọzọ karịa ọnụnọ nke ọgwụ ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ na-adịghị mma na autopsy - na-enweghị ihe ịrịba ama nke ọrịa ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ n'okporo ámá.
"Enweghị ihe ọ bụla gosiri site na autopsy na ọ dị ihe ọ bụla na-ezighị ezi na ya nke ga-eduga na ọnwụ akaghi aka," Rogers kwuru.
A na-ahazikwa ndị ọka ikpe ka ha nụ Tuzdee site n'aka onye dibịa bekee, onye akaebe ya nwere ike bụrụ isi n'ịgbakọ ogologo ndụ ndụ Jackson, iji nyochaa mmebi megide onye na-akwalite egwu egwu.
Ihe dị n'okwu a bụ ma AEG Live, bụ onye kwalitere njem nlegharị anya Jackson na 2009, bụ onye na-ahụ maka ọrụ na ilekọta Dr. Conrad Murray, onye a mara ikpe maka igbummasị na-esochi ọnwụ Jackson na Julaị 25, 2009.
Ikpe a na-achọ ego hà nhata nke Jackson gaara enweta kemgbe 2009, ma ọ ka dị ndụ. Ọ bụ ezie na ndị ọka iwu ezinụlọ Jackson gọnarị na ha na-achọ $ 40 ijeri nkwụghachi ụgwọ, agbanyeghị, ikpe ahụ nwere ike iri AEG Live ọtụtụ ijeri dollar.
AEG na nso nso a bụ ọrịre na ọnụ ahịa a na-arịọ ijeri $8.